होसियार ! हानिकारक एप्स डाउनलोड होला – गोर्खा संसार
होसियार ! हानिकारक एप्स डाउनलोड होला
गोर्खा संसार२०७६, २७ मंसिर शुक्रबार १५:०२
काठमाडौं : स्मार्टफोनका लागि विभिन्न किसिमका एप्स स्टोरमा उपलब्ध छन्। अझ तपाइँ एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने फरक फरक किसिमका एप्स डाउनलोड गर्ने अवसर रहन्छन्। तर, यदि तपाइँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई यी ४ किसिमका एप्स आफ्नो स्मार्टफोनबाट हटाउन सुझाव दिन्छौं।
किनकी यी एप्सले तपाइँको स्मार्टफोनको पर्फर्मेन्स, कार्यशैली, डाटा र प्राइभेसीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन्। स्पिड बुस्ट– स्पिड बुस्ट गर्ने दाबी गर्ने एप्सहरू प्ले स्टोरमा दर्जनौंको संख्यामा भेटिन्छन्। स्मार्टफोन स्लो हुनेबित्तिकै तपाइँहरूमध्ये कैयौंले गुगल प्ले स्टोरमा गएर यस्ता एप्स डाउनलोड गर्नुहुन्छ जसले मेमोरी वा र्‍यामलाई बुस्ट गर्ने दाबी गर्छन्। तर यिनीहरूले साँच्चिकै केही गर्दैनन्।
स्पिड बुस्ट गर्ने दाबी गर्ने एप्स ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका हुन्छन् र यसले तपाइँको स्मार्टफोनमा विभिन्न अनुमति लिएको हुन्छ। यसले तपाइँको डाटा चोरी गर्ने वा तपाइँलाई विज्ञापन देखाउने काम गर्छ।
एन्ड्रोइडमा पहिलेदेखि नै यस्ता फिचर हुन्छन् जसले फोनको मेमोरीलाई बुस्ट गर्छ। मेमोरी सेभिङको दाबी गर्ने थर्ड पार्टी एप्सले सामान्य स्तरमा तपाइँको स्मार्टफोनमा कुनै सुधार गर्दैनन्।
ब्याट्री सेभ गर्ने एप्स– गुगल प्ले स्टोरमा ब्याट्री डाक्टर, ब्याट्री सेभर, ब्याट्री सलुसनलगायत नाममा सयौं एप्स भेटिन्छन्। यी एप्सले तपाइँको स्मार्टफोनको ब्याट्री बचाउने दाबी गर्छन्। कतिले त यस्तो एप्स इन्स्टल गरेपछि ब्याट्री ब्याकअप डबल हुने बताउँछन् तर यस्तो केही पनि हुँदैन।
लिथियमको ब्याट्री हुन्छ र यसले आफ्नो किसिमले काम गर्छ। सबै स्मार्टफोनमा पावर सेभिङ मोड राखिएको हुन्छ र तपाइँले यसलाई प्रयोग गरेर ब्याट्री सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यी एप्सहरूको केही काम छैन।
ब्लाटवेयर– कैयौं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन कम्पनीले पहिले नै यसलाई इन्स्टल एप्सको रूपमा उपलब्ध गराएका हुन्छन्। यी एप्सलाई तपाइँले ब्लाटवेयर पनि भन्नसक्नुहुन्छ। यी अनावश्यक एप्सले तपाइँको स्मार्टफोनको ऊर्जा र कार्यक्षमतालाई असर पारिरहेका हुन्छन्। यी अनावश्यक एप्स तपाइँको कामको लागि उपयुक्त छैनन् भने यसलाई हटाउनुस्। यदि यी अनइस्टल हुँदैनन् भने तपाइँले यसलाई डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता एप्सले अधिक मेमोरी खपत गर्ने गर्छन्।
क्लिनिङ एप्स– क्लिन मास्टर, क्लिनर, स्मार्टफोन क्लिन नाममा कैयौं एप्स उपलब्ध छन्। यी जस्तै अन्य क्लिनिङ एप्स प्रयोग गर्नु जोखिमयुक्त हुन्छन्। क्लिन मास्टर एपमाथि नै कैयौं आरोप लागिसकेका छन्। स्मार्टफोन क्लिन गर्ने नाममा यी एप्सले स्मार्टफोनको मेमोरी र इन्टरनेट डाटा खपत गरिरहेका हुन्छन्। यसका साथै तपाइँको डाटासमेत चोरी गरिरहेका हुन्छन्।
अाजदेखि SEE परीक्षा शुरू, गाेरखामा २५ केन्द्र निर्धारण, २हजार ४ सय ६ बिद्यार्थी सहभागी
२०७९, ९ बैशाख शुक्रबार २१:२५
परिक्षाको प्रश्नपत्र बिग्रिएको तर प्रशासनले वेवास्ता गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुद्वारा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी
२०७९, ५ बैशाख सोमबार २२:०१
गाेरखामा अाेंकार याेग अायुर्वेद गु्रूकुलकाे शिक्षा सचिव काेइरालाद्वारा शिलान्यास
२०७९, ३ बैशाख शनिबार २२:३०
अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक अवार्ड २०२१ बाट गोरखा इन्टरनेसनल पब्लिक स्कुल सम्मानित
२०७८, २९ चैत्र मंगलवार २२:२०
कक्षामा पढेकाे व्यवसायिक शिक्षा व्यवहारमा उतार्दै बिद्यार्थीहरू
२०७८, १८ चैत्र शुक्रबार २०:४५